Taliyaha DANAB oo ku dhaawacmay weerar lagu qaadey Gud Sh/Hoose | KEYDMEDIA ENGLISH
Taliyaha DANAB oo ku dhaawacmay weerar lagu qaadey Gud Sh/Hoose
Gaashaanle Cabdullaahi Beeryare ayaa xilka taliyaha DANAB loo magacaabey bishii lasoo dhaafay, kadib markii Farmaako uu eryay Cabdimaalik oo mudo Todobaadyo ah ugu xirnaa Wasaaradda Gaashaandhigga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha cusub ee Ciidamada DANAB ayaa ku dhaawacmay weerar qarax iyo mid toos ah oo Saakay lagu qaadey Kolonyo galbinaysay Gudoomiyaha Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Weerarka gaadmada ah ayaa ka dhacay degaanka Tixsiile, oo ku dhaw Wanlaweyn, waxaana goobta ku dagaalamay rag katirsan Al-Shabaab iyo Ciidanka la socday gudoomiyaha oo xiligaas ka yimid Balli-doogle, kuna soo jeeday Muqdisho.
War kasoo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in 4 askari oo DANAB ah ay ku dhinteen qaraxa, islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo uu ku jiro Cabdullaahi Beeryare, kuwaasoo dhaawacyadooda loo qaadey Balli-doogle.
Ma jiro war kasoo baxay dowladda Farmaajo oo ku aadan weerarka culus ee lagu dhaawacay Taliyaha DANAB, kaasoo xilkan uu Farmaajo u magacaabey bishii lasoo dhaafay kadib markii uu eryay Gaashaanle Cabdimaalik.
Shabeellaha Hoose ayaa ah gobolka ugu colaadaha badan Soomaaliya, waxaana aad ugu xoog badan Kooxda Al-Shabaab, iyadoo ay ku sugan yihiin Ciidamo badan oo katirsan dowladda iyo AMISOM oo mudo ka badan 10 sano kula dagaalamayay argagaxisadda.
0 Comments Topics: al-shabaab danab qarax soomaaliya